Qiimaha Ciyaartoyga Ee Kulanka Barca V City Oo Kor U Dhaafay €551 Milyan
HomeChampions LeagueQiimaha Ciyaartoyga Ee Kulanka Barca V City Oo Kor U Dhaafay €551 Milyan
18/10/2016 Abdiwahab Ahmed
Habeenka Arbacada waxa garoonka Camp Nou isaga hor iman doona qaar ka mid ah ciyaartoyga ugu wanaagsan dunida, marka ay Manchester City ka hor timaaddo Barcelona, waxaana uu noqonayaa kulanka ugu qaalisan marka la eego qiimaha ciyaartoyga foodda is daraya.
Marka laysku geeyo 39-ka ciyaartoy ee ay labada kooxood iibsadeen afartii sannadood ee u dambeeyey waxay ciyaartooyo ku iibsadeen lacag ka badan 1.06 bilyan Euros, waxaana ciyaartan isaga hor imanaya ciyaartooyo qiimahoodu yahay 551 million euros marka la isku geeyo.
Kooxda Ingiriiska ah ee Manchester City, waxa lagu eedeeyaa in ay lacag ku farraqdo ciyaartoyga oo ay suuqa la taagan tahay kiish buuxa oo ay dul dhigayso ciyaartoyga ay u baahan tahay, laakiin Barcelona ayaa iyaduna hannaankeedii ciyaartoy soo saarista dhantaashay, markii ay lacago xad-dhaaf ah ku iibsatay Luis Suarez iyo Neymar.
Labadan ciyaartoy, waxa Barcelona kaga baxday lacag dhan 184 milya Euro, halka Man City ay 196 Milyan Euro ku bixisay Raheem Sterlig, Kevin De Bruyne iyo John Stones.
Qiimaha ciyaartoygu ku joogaan kooxahan, waxa kor u sii qaadaya Arda Turan, Nicolas Otamendi, Fernandinho, iyo xattaa Aleix Vidal oo inkasta oo uu kaydka hadhsado haddana lacag badan ay ku bixisay Barcelona.
Marka la isku darayo, shaxda kooxahan ee ciyaartoyga qaali ah waxa aan ku jirin oo laga saaray Samuel Umtiti oo ay Barcelona ku iibsatay 25m euro iyo Jerremy Mathieu oo ay siisatay 20m euro, halka dhinaca Manchester City weerarkeeda aanu ka muuqanin Leroy Sane oo 45 milyan Euro ay ku bixisay xagaagii.
Aguero Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Manchester City
AC Milan Oo Heshiis Rasmi Ah Kula Wareegtay Fernando Torres
28/12/2014 Abdiwahab Ahmed